Nongshim Chapaghetti Spicy Instant Noodle (137g x 2packets) – SUNNY eSTORE
Nongshim Chapaghetti Spicy Instant No...
Nongshim Chapaghetti Spicy Instant Noodle (137g x 2packets)
SUNNY Everyday StoreSKU: 8801043044059
ကိုရီးယား ရဲ့ ထိပ်တန်းအစပ် အရသာ! ဒါကျတာ့ ကိုရီးယား ရဲ့ ပဲခေါက်ဆွဲမဲ ဖြစ်ပြီး Roasted Chajang(ပဲ) အနှစ်အရသာနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် သင်ါပါးစပ်ထဲတွင် ပျော်မွေ့ သွားပါမည်။ Nongshim မှ ထုတ်လုပ်တဲ့ Chapagetti ဟာဆိုရင်Chajangmyun(ပဲခေါက်ဆွဲ) ကိုသင့်အိမ်တွင်လွယ်ကူစွာ ပြုလုပ်ပြီး စားသုံးနိုင်ပါတယ်။
ဤ ၃ ဆင့် နှင့် အရသာရှိသော ခေါက်ဆွဲကိုပြုလုပ်ပါ။
၁) ၆၅၀ ခန့်ရှိသောရေကိုဆူအောင်တည်ပြီး ခေါက်ဆွဲနှင့် အမှုန့် များထည့်ပါ။
၂) ရေ ၈ ဇွန်းစာလောက်ချန်ပြီး ရေကိုစစ်ထုတ်လိုက်ပါ။ ရေသာမှုန့်များ နှင့် သံလွင်ဆီ ထည့်ကာ ရောမွှေပါ။
၃) သေချာမွှေ ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။
သင်ကြိုက်သလို သခွားသီး နှင့် ကြက်သွန် များထည့်၍လည်း စာနိုင်သည်။
ပါဝင်သော ပစ္စည်းများ -
ခေါက်ဆွဲ : ဂျုံ ၊ စားအုန်းဆီ ၊ အာလူးကော်ရည် ၊ ဆား ။
အရည်မှုန့် : ပဲနှစ် (ဂျုံ ၊ ရေ ၊ ပဲ ၊ ဆား) Caramel မှုန့် ၊ သကြား ၊ Monosodium Glutamate ၊ ဆား။
အသီးအရွက်ရည် : ပဲ Protein ၊ ကြက် သွန်ဖတ် ၊ ဂေါ်ဖီဖတ် ၊ မုန်လာဥခြောက် ၊ အာလူးကြော်။
အသီးအရွက်ဆီရည် : ဆီနီ ၊ ကြက်သွန်ဆီ ၊ Roasted Seasoning Oil ၊ သံလွင်ဆီ။
The spicy taste of Korea! This is the Korean black spaghetti with roasted chajang sauce that will melt in your mouth. With Nongshim Chapagetti, it makes it easy for you to enjoy the taste of Chajangmyun in your own home! The3simple steps to prepare this yummy noodle are : 1) Boil around 650ml and add noodles after they are boiled together with the flakes for5minutes. 2) Drain the water out(leave around 8 spoons of water) and mix it well with soup and olive oil. 3) Stir well and you can enjoy it! You can add cucumbers, onions, etc... according to your taste.
Key Ingredients: Noodles: Wheat Flour, Palm Oil, Potato Starch, Salt. Powder Soup: Soybean Paste (Wheat Flour, Water, Soybean, Salt), Caramel Powder, Sugar, Monosodium Glutamate, Salt. Vegetable Soup: Textured Bean Protein, Onion Flake, Cabbage Flake, Dried Carrot, Fried Potato. Vegetable Oil Soup: Spicy Vegetables Oil, Roasted Onion Oil, Roasted Seasoning Oil, Olive Oil.
Includes -2packets of Nongshim Chapaghetti Spicy Instant Noodle (137g)